Ndị na-ere SMS | Ndị na-ere ozi ederede ederede
Wednesday, May 19, 2010 Mọnde, Jenụwarị 16, 2017 Adam Obere
Mobile Marketing na-abụ ngwa ngwa nke ọtụtụ mmefu ego azụmaahịa. Otutu ahia ahia na abia n'ime otu ato:
Izi ozi SMS / ederede
Mobile Web na Ngwa Mobile na-enwe mmekọrịta zuru oke ma nwee ihe eserese. Ihe ndọghachi azụ na nke abụọ a bụ na ha dị oke ọnụ iji mejuputa ma debe ya. Maka nke a, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ebido mbọ azụmaahịa mkpanaka ha na SMS, nke kpatara ntiwapụ na ọnụ ọgụgụ ndị na-ere SMS. Offọdụ n'ime ndị mgbere a bụ nnukwu ndị ọzọ ọ bụghị nke ukwuu yana ụfọdụ bụ naanị… Gini bu ihe diri ezigbo onye ahia SMS? Kedu otu m ga - esi họrọ onye na - ere SMS / Text Izi ozi?
Enwere isi ihe atọ dị mkpa ịtụle mgbe ị na-ahọrọ onye na-ere SMS:
Ndi ahia ahụ na-ezipụ ozi site na shortcode ma ọ bụ jiri sms iji zipu ọnụ ụzọ ámá? Ọ bụla SMS Text ozi ere bara uru na-arụ ọrụ kwesịrị iji a shortcode. Ojiji nke email na sms ụzọ ụzọ maka ire ahịa mkpanaka na-emebi usoro nke ọrụ ndị ọrụ na ọ bụkarị ntụkwasị obi.
Ndi ahia ahụ nwere ndị ọkachamara na-ere ahịa na mkpara Ndị a bụ ndị ọkachamara ọ bụghị naanị na ha nwere ihe ọmụma gbasara ọrụ teknụzụ nke Mobile Marketing Association ma ha dịkwa oke mkpa na-enyere gị aka ịnyefe ọdịnaya dabara na ndị na-ajụ ya. Ahịa Mobile bụ ọwa pụrụ iche n'ihi na ọ bụ ọdịdị dị oke mkpa na ozi a kwesịrị iji nke a n'uche.
Kedu ihe ndị ahịa na-ere ahịa na-ekwu banyere ọrụ ndị ahịa ha? - Obi ụtọ na ndị ahịa bụ ihe ịrịba ama nke ezigbo onye na-ere ahịa, o yiri ka o doro anya?
Mobile Marketing na-etolite n'ime ụlọ ọrụ siri ike mana ọ ka na-eto eto na enwere ọtụtụ egwuregwu na egwuregwu ahụ. Jide n'aka na ị na-eme ihe omume ụlọ akwụkwọ mgbe ị na-ekpebi onye ị ga-agagharị.
Tags: ahịa efuSMSSMS ahịa
Gwa m okwu na TokBox
Mee 20, 2010 na 12: 39 PM
Isi ihe magburu onwe ya, Adam. Họrọ onye na-ere ekwentị mkpanaka SMS nwere ike ịba ụba. Lelee nke a blog post maka ụfọdụ isi ihe ndị dị mkpa iji tụlee (na ajụjụ ịjụ) mgbe ị na-ekpebi onye na-ere ahịa mkpanaka SMS: http://lunchpail.knotice.com/2010/04/28/tips-for-choosing-an-sms-mobile-vendor/